> Resource > Video > FLV Player: Sida loo Play FLV Files
FLV waa mid ka mid ah kuwa ugu weyn loo-isticmaalo hoorto qaabab warbaahinta Internet-ka. Maxaa yeelay, waa qaabka koowaad ee doorashada u badan goobaha video-wadaaga sida YouTube iwm Sidaa daraaddeed ayaa dadku si fudud u heli karaan faylasha FLV internetka oo waxaan iyaga ku badbaadin on kombiyuutarada ay. Sidaa darteed, ciyaaro files FLV habsami leh ee kombiyuutarada waxay noqotay mid aad u muhiim ah. Tani waxay halkan article ku tusaysaa sida uu u xaliyo dhibaatada FLV ee loo maqli karo. Waxaa jira laba qaybood ee qodobkan.
Qaybta 1aad: Sida loo Play FLV Faylal ay la Players FLV ee Mac / Windows
Qeybta 2: Sida loo Beddelaan FLV Faylal ay u Radidiyaha ee Mac / Windows
Haddii aad tahay user Windows ah, isku day in aad u badan tahay inuu u ciyaaro files FLV la dhisay-in ciyaaryahanka-Windows Media warbaahinta Player. Wakhtigan, aad niyad u heli lahaa, waayo, FLV ma aha qaab ah in WMP taageertaa si dabiici ah. Sidaas waa inaad ka dooro ciyaartoyda kale FLV si ay u ciyaaro si habsami aad kombuutarka. Halkan waxaan ku talin lacag la'aan ah oo weli dhan-agagaarka FLV player- Wondershare Player .
Waxa ay taageertaa tiro balaadhan oo ah qaabab video sida FLV, MPEG, VOB, AVI, ASF, wmv, MOV, MP4, MP3 iyo in ka badan. Sidaas daraadeed waxaad u isticmaali kartaa in ay la tacaalaan dhammaan qaabab video. Marka laga reebo taageerada video ballaaran, ciyaaryahankaan warbaahinta smart uu leeyahay muuqaalada dheeraad ah oo dareen leh, tusaale ahaan, waxa ay si toos ah ku darayaa files warbaahinta la mid ah si ay u abuuraan playlist ah, si aadan u baahneyn inaad gacanta iyagoo aad ku dartid. In eray, waa ciyaaryahanka ugu fiican FLV aad doorato. Hadda ka soo dejisan ama sahamin macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ciyaaryahankaan caqli >>
Users Mac sidoo kale la kulmi kartaa dhibaato la mid ah haddii QuickTime waxaa loo isticmaalaa sida ciyaaryahan FLV ay Mac. QuickTime ma Flv format. Xalka isku waa in ay isticmaalaan ciyaartoyda kale ama badalo FLV in QuickTime qaab socon in Part 2.
Haddii aadan rabin in ay isticmaalaan ciyaartoyda kale u ciyaaro files FLV, waxaad dooran kartaa in loogu badalo FLV ciyaaryahan kasta aad rabto. Download iyo rakibi a smart Video Converter ( Video Converter u Mac ). Markaas hesho faahfaahinta hoose:
1. Orod app iyo dajiyaan files FLV aad barnaamijka.
2. Dooro qaab socon aad ciyaaryahan. Si aad u samayn, waxaad riixi kartaa "Qaabka" icon dhinaca midig si uu u furo qaab suuqa kala saarka in ay doortaan mid ka mid ah sida uu sheegay aad u baahan tahay.
3. Guji ah "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan diinta FLV u waafaqsan ka badan. Markii diinta la sameeyo, waxaad ka heli doontaa adiga ciyaaryahan aad u fiican ka ciyaari kara faylasha wax soo saarka.
Top 5 MTS Video ayeey Software talinayo